Nagu saabsan - Wilongda Technology Co., Ltd.
Wilongda Technology Co., Ltd. waa soo saaraha qaybaha kala duwan ee baabuurta lagu beddelo suuqa ka dib, furaha otomaatiga maran, furayaasha qalabka wax lagu beddelo, kontoroolka fog. Kaas oo daboolaya in ka badan 60 nooc oo gawaarida waaweyn ah oo leh Audi, BMW, Mercedes, Volks Wagen, Renault, Peugeot , Citroen, Fiat, Ford .... alaabooyinka laga iibiyo adduunka oo idil, oo ay ugu weyn yihiin USA, Europe, South America iwm, soo dhaweyso la-hawlgalayaasha OEM iyo ODM si ay noogu soo biiraan.
● Dammaanad qaad tayada.
● Iswaafaji Jadwalkaaga.
● Ka shaqee Miisaaniyaddaada.
Tayada ayaa ah nolosheena, adeegu waa nafteena! waa aaminaadda adeegeena. Iyada oo ku saleysan tikniyoolajiyadda horumarsan, wada shaqeynta iyo xirfad ahaaneed, waxaan sidoo kale xakameyneynaa kharashka iyada oo loo marayo maamulkeenna sare, si aan u bixinno alaab tayo sare leh iyo sidoo kale qiimo macquul ah. Waxaan higsaneynaa inaan u fidino adeegga ugu kalsoon ee ugu xirfadda badan macaamiisheenna sharafta leh adduunka.
Wilongda Technology Co., Ltd waxay raacdaa siyaasada ganacsiga "Tayada ayaa ka sareyso wax walba, adeega ayaa mustaqbalka sameeya", waxayna raacdaa tayada heerka koowaad iyo horumarka farsamada. Iyada oo loo marayo horumarinta joogtada ah ee maareynta shirkadaha iyo dadaallada aan kala go 'lahayn ee lagu doonayo in lagu dhiso xiriir iskaashi oo muddo dheer ah, waxaan si daacad ah u siineynaa macaamiisheenna wax soo saar iyo adeegyo hoggaamineed. Waxaan sii wadi doonnaa hormarinta iyo soosaarida alaabooyin badan oo kafiican macaamiisha qiimeeya tayada iyo astaanta muuqaalka.
Horumarka degdegga ah ee warshadaha furaha baabuurta, waxaan si dhow ula socon doonnaa horumarka tignoolojiyada casriga ah ee soo-saarka adduunka, noqo mid macquul ah oo hal-abuurnimo leh, oo si joogto ah u horumaraya!
Macaamiisha waa lagu soo dhaweynayaa inay weyddiiyaan oo ay dalbadaan alaabtayada.
In la helo badeecado tayo sare leh lana tababaro shaqaale tayo sare leh.
Hogaamiya horumarinta warshadaha LCD oo noqo soo saaraha heerka koowaad ee furayaasha baabuurta! )
--- Dadku u janjeedho, run ka raadsada xaqiiqda, u doodida hal-abuurnimo, iyo si joogto ah uga gudub)
(Falsafada ganacsiga: --- tayo sare, hal-abuurnimo, daacadnimo, adag
Tayo sare: siiso alaab tayo leh iyo adeegyo farsamo
Cusbooneysiin: Adeegsiga tikniyoolajiyad cusub iyo abuuritaan joogto ah ee alaabooyin iyo teknoolojiyad cusub
Daacadnimo: Shirkaddu waa aasaaska horumarka shirkadda. Daacad la’aan, waxba ma jiraan
Adag: Waxaan si adag u dalbaneynaa nafteena, si taxaddar leh ula macaamilnaa cilaaqaadka macaamiisha, macaamiisha waxaan siino alaab tayo leh iyo adeegyo farsamo